बला’त्कार गर्न आएकालाई १३ वर्षीय बालिकाले खु’कुरीले हानिन्: ‘सिरानीमा खु’कुरी राखेको थिएँ, छ’प्काइदिएँ’ - Nepal Insider
Home/समाचार/बला’त्कार गर्न आएकालाई १३ वर्षीय बालिकाले खु’कुरीले हानिन्: ‘सिरानीमा खु’कुरी राखेको थिएँ, छ’प्काइदिएँ’
काठमाडौं । झापामा १३ वर्षीय बालिकाले बला’त्कार गर्न खोज्ने युवकलाई खु’कुरी प्रुहार गरेकी छिन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा यस्तो घुटना भएको हो । बालिका आफैले सो घट’ना बारे सार्वजनिक गरेपछि गाउँलेले थाहा पाएका हुन् । बारम्बार बला’त्कारमा परेकी १३ वर्षीय बालिकाले पछिल्लो पटक बला’त्कार गर्ने क्रममा उनले खु’कुरी प्र’हार गरेकी हुन्। धनकुटाको पात्लेखोलाका सन्तोष गुरुङले बालिकालाई बारम्बार ध’म्कि दिएर बलाुत्कार गर्दै आएका थिए । तर घट’नापछि यसको रहस्य खुलेको थियो ।
घ’टना खुलेपछि स्थानीय युवाले गुरुङलाई प’क्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका छन् । बालिकाकी आमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ओमनमा छिन् । बाबु गाउँमै मजदुरी गर्छन् । दिउँसो कोही नभएका मौका छोपेर घरमा आएर धुम्की दिंदै बला’त्कार गर्ने गरेको पीडित बालिकाको भनाइ छ । गुरुङले बला’त्कारका विषयमा कसैलाई सुनाए बाबुलाई माुरिदिने र विदेशमा रहेकी आमाको श’व बाकसमा ल्याइदिने भन्दै धुम्की दिने गरेको पीडित बालिकाको भनाइ छ । खु’कुरी प्रहाुरबाट गुरुङको टाउकोमा गहिरो चोट लागेका थियो । उनले बाहिर भने लडेर घाइते भएको भन्दै आएको थिए ।
‘तेक्वान्दो खेलाडी हुँ, स्टेप ग्रीन बेल्ट पाएकी छु, मलाई गुरुले सिकाउनु भएको छ, त्यसैले आत्मविश्वास बढेको हो,’ बालिका भन्छिन्, ‘सिरानीमा खु’कुरी राखेको थिएँ, छप्का’इदिएँ’।’ पटक-पटक पीडा सहेर बस्नुभन्दा माुरेर जे’ल जानु ठीक हुने सोचेर खु’कुरी हानेको उनको भनाइ छ । बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । घट’नाका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारले भन्यो अपरिचित नम्बरबाट आएको कल नउठाउनुहोस् ! यस्तो छ डरलाग्दो कारण ?
श्वेता खड्का भन्छिन् – जसले श्रीकृष्णलाई सम्झन छुट दिन्छ उसैसंग विवाह गर्छु
यो घट्नाले अझैँ कति मोड लिने हो….महरासँग रोशनीको त्यो पहिलो भेट…
बल्ल खुल्यो निर्मला हत्याकाण्डको खतरनाक रहस्य, गड्डाचौकीबाट पक्राउ परे मुकेश गोइत